I-Cell-Prokaryotic ne-Eukaryotic Cell
Ubomi bubuhle kwaye bubukhulu. Kodwa nangenxa yonke yobukhulu bayo, zonke izidalwa zenziwa yunithi yendalo ebalulekileyo, iseli . Iseli yileyunithi elula yendaba ephilileyo. Ukusuka kwiibhakteria ezingenayo i-unicellular ukuya kwizilwanyana ezininzi, iiseli yenye yemigaqo-siseko ye- biology . Makhe sijonge ezinye zeengxenye zalo mququzeleli oyintloko wezinto eziphilayo.
Ii-Eukaryotic Cells kunye neProkaryotic Cells
Kukho iintlobo ezimbini zeeseli: iiseli ze-eukaryotic kunye neeseli zeprokaryotic. Iiseli ze-Eukaryotic zibizwa ngokuba kunjalo zinenucleus yangempela. I-nucleus, enezindlu zeDNA , iqulethwe kwi-membrane kwaye ihlukaniswe nezinye izakhiwo zamaselula. Iiseli zeProkaryotic , nangona kunjalo, azikho nucleus yinyani. I-DNA kwiseli yeprokaryotic ayihlukaniswanga nayo yonke iseli kodwa ihlanganiswe kwindawo ebizwa ngokuba yi-nucleoid.
Njengoko ihlelwe kwiNkqubo yeThathu yeZakhiwo , ii-prokaryotes ziquka i- archaeans kunye ne- bacteria . I-Eukaryota zibandakanya izilwanyana , izityalo , iifungi kunye nabaprotisti (isib. Algae ). Ngokuqhelekileyo, iiseli ze-eukaryotic ziyinkimbinkimbi kwaye zinkulu kuneeseli zeprokaryotic. Ngokomyinge, iiseli zeprokaryotic zingama-10 amancinci amancinci kuneeseli ze-eukaryotic.
I-Eukaryot ikhula kwaye ivelise ngokusetyenziswa kwe- mitosis . Kwizinto eziphilayo ezivelisa ubulili , iiseli ezithwalayo ziveliswa ngohlobo lwesahlulo seseli esithiwa i-meiosis .
Uninzi lwama-prokarythi avelisa i-asexually kunye nezinye ngeenkqubo ezibizwa ngokuba yi- binary fission . Ngexesha lokubhalwa kwebhanari, i-molecule enye ye-DNA iyichaza kwaye iseli yasekuqaleni ihlukaniswe ngamabini eentombi ezifanayo. Ezinye izinto ze-eukaryotic ziphinde zenze i-asexually ngokusebenzisa iinkqubo ezinjenge-budding, ukuvuselelwa, kunye ne- parthenogenesis .
Zomzimba zombini ze-eukaryotic kunye neprokaryotic zifumana amandla abayidingayo ukuze zikhule kwaye zilondoloze umsebenzi oqhelekileyo weselula ngokusebenzisa ukuphefumula kwamaselula . Ukuphefumula kweselula kunezigaba ezintathu eziphambili: i- glycolysis , umjikelo we - citric acid , kunye nokuthuthwa kwe-electron. Kwi-eukaryoti, ezininzi iindlela zokuphefumula kwamaselula zenzeka kwi- mitochondria . Kwiipyarikiti, zenzeka kwi- cytoplasm kunye / okanye ngaphakathi kwimbumba yesellu .
Ukuthelekisa ii-Eukaryotic kunye neProkaryotic
Kukho iinkalo ezininzi ezikhoyo phakathi kwezakhiwo ze-eukaryotic kunye neprokaryotic. Itheyibhile elilandelayo lifanisa i- organelles kunye nezakhiwo ezisetyenziswe kwiseli yeprokaryotic eqhelekileyo kulabo abatholakala kwiselfowuni yesilwanyana se-eukaryotic.
Eukaryotic kunye nePropyyotic Cell Structures
Ulwakhiwo lweSeli Cell Prokaryotic Iseli yezilwanyana ze-Eukaryotic
Umlenze weSeli Ewe Ewe
Wall Wall Ewe Hayi
Centrioles Hayi Ewe
Ama-Chromosomes Omnye umde weDNA Baninzi
Cilia okanye i-Flagella Ewe, elula Ewe, ezinzima
Endoplasmic Reticulum Hayi Ewe (ezinye iimeko)
IGolgi Complex Hayi Ewe
Lysosomes Hayi Eziqhelekileyo
Mitochondria Hayi Ewe
Nucleus Hayi Ewe
Peroxisomes Hayi Eziqhelekileyo
Ribosomes Ewe Ewe
20 Best Batman Izindaba zeKrisimasi
Ukuphuculwa kweBeek Easy 2 - Ukuphuculwa kweGalley
I-BYU GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data for Admissions
Kuthetha ntoni "Iprogram"?
Indlela yokudibanisa isenzi esingaqhelekanga sesiFrentshi "Croire"